Milkiilaha PSG Nasser Al-Khelaifi oo qatar ugu jira in Xabsi loo taxaabo Sabab? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Milkiilaha PSG Nasser Al-Khelaifi oo qatar ugu jira in Xabsi loo taxaabo Sabab?
(12-10-2017) Madaxweynaha kooxda kubada Cagta PSG Nasser Al-Khelaifi ayaa lagu soo oogey dawad kadib markii la sheegay in la ogaadey in uu Xiriir musuq maasuq ah dhex maray isaga iyo Xoghayihii hore ee FIFA Jerome Valcke,
Nasser Al-Khelaifi ayaa lasheegayaa in uu lacag laaluush ah siiyey Xogahayihii hore ee FIFA si uu ugu fududeeyo helitaanka baahinta Cayaariha koobka aduunka ee Sanadaha 2018 iyo 2022 qandaraaskaas oo ay qaadatay shirkada uu Madaxda ka yahay Nasser Al-Khelaifi ee BeInSports.
Hogaamiyaha PSG Nasser Al-Khelaifi ayaa la ogaadey in uu bixiyey lacago laa luush ah kadib maaritaan lagu Sameeyey xafiiska Xoghayhihii hore ee FIFA taas oo keeneysa in Maxkamad lasoo taago Ninka u dhashay dalka Qatar ee iska leh kooxda PSG ee dalka France.
Warkaan oo labaahiyey Maanta Khamiis ahayd ayaa sidoo kale la sheegayaa in ay qatar weyn gelin doonto Marti gelinta koobka aduunka 2022 ka ee dalka Qatar waxaana laga cabsi qabaa in lahelo Dukumiintiyo kale oo Laaluush lagu siiyey Madaxdii hore ee Xiriirka FIFA.